Haayada waddooyinka Puntland ee PHA iyo shirkada Isxilqaan oo kala saxiixday heshiiska dhismaha jidka u dhaxeeya Garoowe iyo Gaalkacyo - Puntland Mirror Believable Media Website
HomeSomaliaPuntlandHaayada waddooyinka Puntland ee PHA iyo shirkada Isxilqaan oo kala saxiixday heshiiska dhismaha jidka u dhaxeeya Garoowe iyo Gaalkacyo
April 1, 2017 Puntland Mirror Puntland, Somalia 0
Haayada waddooyinka Puntland ee PHA iyo shirkada Isxilqaan oo kala saxiixday heshiiska dhismaha jidka u dhaxeeya Garoowe iyo Gaalkacyo. [Xigashada Sawirka: Puntland Post]
Garoowe-(Puntland Mirror) Haayada waddooyinka Puntland ee PHA ayaa maanta oo Sabti ah si rasmi ah ugu saxiixday shirkad la dhaho Isxilqaan oo ku guulaysatay tartankii qandaraaska mashruuca dhismaha jidka isku xira magaalooyinka Garoowe iyo Gaalkacyo.
Munaasabad ka dhacday xarunta haayada PHA oo kutaala magaalada Garoowe ee caasimada Puntland ayaa waxaa kasoo qaybgalay wasiirka howlaha guud iyo gaadiid Puntland agaasimaha kumeelgaarka ah ee PHA, masuuliyiinta shirkada Isxilqaan iyo saraakiil ka socotay haayada GIZ.
Mashruucaan ayaa waxaa dhaqaalaha ku baxaya ku deeqay Midowga Yurub oo fulintiisa u wakiishay haayada horumarinta u qaabilsan Jarmalka ee GIZ.
Muqdisho-(Puntland Mirror) Qarax culus ayaa ka dhacay goor dhawayd meel u dhow meesha laga soo galo garoonka diyaaradaha Muqdisho ee caasimada Soomaaliya. Qaraxa ayaa waxaa daba socday rasaasta qoryaha, sida ay sheegeen goobjoogayaal. Faahfaahin dheeri [...]